राजधानी सार्ने ट्रम्पको निर्णयको इस्लामिक देशद्वारा विरोध - Koshi Online
राजधानी सार्ने ट्रम्पको निर्णयको इस्लामिक देशद्वारा विरोध
एजेन्सी, मङ्सिर २०
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा सार्ने निर्णय गरेपछि इस्लामिक मुलुकहरू अमेरिकाप्रति क्रुद्ध भएका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । जेरुसेलमलाई राजधानी बनाउँदा मुस्लिम समुदायमाथि आघात पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाएर तेल अविवमा रहेको आफ्नो दुतावासलाई जेरुसेलममै सार्ने तयारी ट्रम्पले गरेका छन् ।
साउदी अरबका राजा सलमानले ट्रम्पको यस निर्णयले मुस्लिम समुदायलाई चोट पुग्ने बताए । ट्रम्पको निर्णय विश्वको सुरक्षा स्थायीत्व तथा शान्ति प्रक्रियाको लागि खतरापूर्ण रहेको प्यालेष्टाइनका नेता मोहम्मद अब्बासको जिकिर छ । यस निर्णयको विरोध गर्दै इजिप्ट र जोर्डनका नेताले इस्लामिक राष्ट्रको स्थायित्वप्रति चिन्ता प्रकट गरे । इस्लामिक मुलुकको स्थायित्वमाथि खलल नपुर्याउन उनले अमेरिकी संस्थापनसँग आग्रहसमेत गरे । जेरुसेलमको भूभागमा इजरायल र प्यालेष्टाइन दुवैले आआफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् ।
चीनसँग किन सहयोग र समन्वय विस्तार गर्दैछ रुस ?
अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा परी ६० जना लडाकु मारिए
माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक पावल एलनको निधन
होसियार ! सार्वजनिक ठाउँमा सुत्नुहुन्छ ? कारबाहीमा पर्नु होला !
फ्रान्सको दक्षिण पश्चिममा आँधी, ६ जनाको ज्यान गयो
इंग्लिस प्रिमियर लिग : सालाहको गोलमा लिभरपुलको कठिन जित
४ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:५२